Barlamaanka Soomaaliya Oo U Kala Baxay Shiica iyo Sunno. | Xaqiiqonews
Barlamaanka Soomaaliya Oo U Kala Baxay Shiica iyo Sunno.
magacyada aan ugu yeernay labada kooxood ee barlamaanka ma ahan kuwii dhabta ahaaa, waa magacyo aan annaga isticmaalnay marka la eego doodda iyo arinta muranka ka taagan yahay.
Qodobka xasaasiga ah waxa auu yahay (sunna) waxa aan ula jeedna kooxda barlamaanka ee sheegtay in ay u hadlayaan shacabka kuwaasi oo qaatay magaca ah (Ahlu-sunna Waljamaaca).
Dhanka kale dhadhan ma lahan magaca “Shiico” sababtoo ah waxaa uu ka soo horjeedaa jamaacada, ereyga “shiico” waa kalimad carabi oo macnaheedu yahay “taageero” sidaa darteed kooxd barlamaanka ee taageersan DF-ka waxa aan ugu yeernay Shiicada Farmaajo.
Kulanka maanta waxaa xaadiray 164 xildhibaan, iyadoo markii hore uu guddoomiyaha baarlamaanka uu furay kulankii maanta.
Sababta uu kulanka u baaqday ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay khilaaf ka dhashay Codkii loo qaaday warbaahinta,isla markaana xildhibaanada ay u kala baxeen “Suniyiin taageersanaa Warbaahinta in la ogolaada” iyo koox shiico ah oo diiday ka soo qeybgalka saxaafadda.
Miyaanan la sugeynin dagaal faraha loogu gubto oo dhaxmara labada kooxood?
Ma laga yaabaa in dagaalkii Karbala(dagaalkii shiicada iyo Suniiyiinta ku dhaxmaray Karbale/Ciraaq Xilligii Amowiyiinta) oo kale uu ka dhaca Muqdisho?
Inkastoo dooddan aysan aheyn mid muhiim ah marka laga fiiriyo milatari ahaan, balse dadka qaar ayaa dhacdadii maanta u arki kara isku day fashilmay oo ay sameeyeen kooxda shiicada farmaajo, oo hal ku dhig ka dhigtay “Xildhibnaada Shabaab la shaqeeya”